सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश २का प्रमुख डिआइजी चन्द्र प्रकाश गौतम। | रेडियो झापा 100.7 MHz.
सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश २का प्रमुख डिआइजी चन्द्र प्रकाश गौतम।
रेडियो झापा 100.7 MHz. शुक्रबार, मंसिर १२, २०७७ १५:५९:३४
१२मंसिर,दमक/गृहमन्त्रालयले विहीबार सशस्त्र प्रहरी वल नेपालका एक दर्जन डिआईजी हरुको सरुवा गरेको छ।
वाहिनीपतिमा रहेका केहि डिआईजीहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यहि मंशिर २८ गते अनिवार्य अवकासमा जान लागेका कारण गृह मन्त्रालयले डिआईजी हरुको सरुवा गरेको छ।
शस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यलय हलचोकमा कार्यरत डि.आइजी चन्द्र प्रकाश गौतम(सिपि)लाइ हालसालै मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश न.०२ प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो।
उनि सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना हुँदा अर्थात् २०५८ सालमा नेपाली सेना(सह-सेनानी) बाट सेवा परिर्वतन गरी डिएसपि हुँदै अहिले डिआइजी भएका हुन।उनको कार्यकाल सकिन अझै ५ वर्षको समय रहेको छ।
उनलाइ भबिष्यको सशस्त्र प्रहरी बलका आइजीको दाबेदारको रुपमा समेत हेर्न सकिन्छ।उनले कार्यरत रहेको दिन देखि आज सम्म कुनै पनि गलत कार्य गरेको पाइदैन।उनी सशस्त्र प्रहरी बलका इमान्दार, प्रतिष्ठित ब्याक्ती समेत हुन।
उनको ब्यक्ति वृतान्त:
ताप्लेजुङको विकट खेवांग गाउँमा जन्मिएर तेह्रथुमको आठराईमा हुर्किएका हन् सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका डिआइजी चन्द्र प्रकाश गौतम। उनी हाल सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हलचोकस्थित सीमा तथा कार्य विभागमा कार्यरत छन्। रसायन शास्त्रमा एमएससी गरेका गौतमले जीवनको करिब २५ वसन्त नेपालको सुरक्षा निकायमा सेवा गरेर बिताएका छन्।
अहिलेको पद र प्रतिष्ठा उनको जीवनको लामो यात्राले आर्जन गरेको हो। जीवनमा प्रशस्तै हन्डर र ठक्करसँग जुध्दै उनी यहाँसम्म आइपुगेका हन्। आफू हिँड्ने गोरेटो आफैं बनाउँदै अहिलेको यो उच्च पदमा पुग्दा बनेको उनको जीवन कथा कम्ता रोचक छैन।
ताप्लेजुङमा जन्मि पनि गौतमको बाल्यकालको अधिकांश समय तेह्रथुमको आठराईमा बित्यो। उनी मामाघरमै हुर्किएका हुन्। आमाको एकल अभिभावकत्वमा हुर्किएका उनी। बुवाले दिने माया, मार्गनिर्देशन र अभिभावकत्व कस्तो हुन्छ अहिलेसम्म थाहा छैन। ‘संसारमा सबै सन्तानले उस्तै भाग्य बोकेर आएका कहाँ हुन्छन र?’, उनी भन्छन्, ‘यसमा भाग्यलाई दोष दिनु भन्दा नियतिको खेल नै यस्तै हो भन्ने ठान्दछु।’
चालिसको दशकमा उनले बाल्यकाल बिताए। गाउँमा अन्य बालकहरु जस्तै सुख दु:खबीच उनी हुर्किए। अन्य बालकहरू जस्तै धुलो माटो र हिलो मैलोसँगै खेलेर उनी हुर्किए। बनपाखा, भितिर पनि डुले। यसो भन्दा उनलाई कुनै अफ्ठेरो लाग्दैन।
अहिले उनले आफू बालककालमा कस्तो थिएँ भनेर सोधेको बेला आमाको जवाफ हुन्छ, ‘अलिक चन्चले, सृजनशील, तीक्ष्ण बुद्धिको र अरु भन्दा अलि फरक । एकोहोरो र जिद्दी पनि।’
बालककालमा उनको पढाइ उत्कृष्ट भए पनि फिरन्ते बन्यो। कहिले तेह्रथुम, कहिले झापा। एसएलसी दिँदासम्म उनले विद्यालय फेरिरहे। २०४३ सालमा एसएलसी दिएपछि पनि उनको अध्ययन स्थिर भएन। फिरन्ते जस्तै यताउता घुमिरहे। एसएलसीमा राम्रो अंक आएपछि उनले विज्ञान रोजे। सानैदेखि विज्ञान पढ्ने रुचि थियो।
विज्ञान पढ्ने सपना पूरा गर्न उनी काठमाडौं खाल्डो हान्‍निए। काठमाडौं आएर अमृत साइन्स क्याम्पसमा इन्ट्रान्स दिए, पास पनि भए। भर्ना भए, तर विडम्बना काठमाडौंको भीडमा उनी अडिन सकेनन्। काठमाडौंमा नअडिनुको एउटै कारण थियो अभाव।
‘शुरुमै होस्टल पाएको भए म काठमाडौंमै बस्थे होला। तर, कोठा भाडा तिरेर बस्न र विज्ञान पढ्ने बन्दोबस्ती जुटाउन मसँग प्रशस्त पैसा भएन,’ उनले संकटका ती दिनबारे सुनाए। आईएससी प्रथम बर्ष पनि पूरा नगरी उनी राजधानी छोडेर महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगर पुगे।
विराटनगरबाट आइएस्सीको परीक्षा सके। त्यहाँबाट उनी पुन: मावली गाउँ तेह्रथुमको आठराई पुगे। जहाँ उनले गणित तर विज्ञान शिक्षकको नयाँ परिचय बनाए। यो २०४६ को जनआन्दोलन अघिको कुरा हो। आइएसी सकेपछि उनलाई डाक्टर बन्ने रहर थियो। उनी फेरि तेह्रथुमबाट मेडिकल तयारीका लागि काठमाडौं हान्‍निए, यद्यपि चाहे जस्तो सबै कुरा कहाँ पूरा हन्छ र? डाक्टर नबन्‍ने भएपछि बिएस्सी पढ्नु नै थियो। उनी अस्कलमै पुगे बिएस्सीमा भर्ना भए। यतिबेला उनको परिवार झापामा बसाईं सरिसकेको थियो।
अस्कलमा बिएस्सी पढ्दा उनीसँग राजधानीमा टिक्न जागिर खानुपर्ने बाध्यता थियो। उनीसहित साथी मदन उप्रेती र नवीन देउजाले बागबजारमा ‘एबिसी ट्युसन सेन्टर’ खोलेर अंग्रेजी भाषासहितको ट्युसन पढाउन थाले
करिव ५ वर्ष नेपाली सेनामा बिताएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनाका रुपमा पहिलोपटक पूर्वी टिमोरमा शान्ति स्थापानार्थ उडे। पर्वी टिमोरमा रहँदा मिलिसिया विरुद्धको अभियानमा फिल्ड कमान्डरका रुपमा जिम्मेवारी पुरा गर्दै त्यहाँका जनतालाई सुरक्षा प्रदान गरेको अनुभव उनीसँग छ।